Iindaba-Isikhululo seoyile Ipetroli yokuqokelela iVapor yeNtengiso yeNdawo: uKhuphiswano lweDynamics kunye ne-Global Outlook 2025
Impahla ekhuselayo emileyo
I-T-shirt (kunye ne-anti-static fiber)
Ibhulukhwe (kunye nefayibha e-anti-static)
Ibhatyi (kunye nefayibha e-anti-static)
Ihempe yePolo (ene-anti-static fiber)
Impahla yomqhaphu (kunye ne-anti-static fiber)
Ibhatyi engenamanzi (kunye ne-anti-static fiber)
Umqhaphu Vest (kunye nefayibha Anti-static)
Vest yoKhuseleko (kunye nefayibha e-anti-static)
I-ovaroli (kunye ne-anti-static fiber)
Isikhululo seoyile sePetroli kwiPetroli yokuQokelela iNkqubo yokuPhononongwa kweNkcazo ibonisa ukujongwa ngokubanzi kunye nokufundwa okunzulu kweSitishi seoyile sePetroli sokuQokelela iNkqubo yokuThengisa iMarike ukufezekisa ukuqonda konke kunye nobukrelekrele beshishini kwintengiso ngoHlalutyo lwezeMali kunye nezoShishino lwabadlali abaphambili, iinkampani, ingingqi, iintlobo, izicelo kunye nobubanzi bayo bexesha elizayo kwishishini kude kube ngu-2025.
Ingxelo yophando ngeSitishi seoyile sePetroli yokuQokelelwa kweVapor yokuvavanya iinkqubo zentengiso ezichaza ukukhula kwecandelo ngokommandla wengingqi kunye nomhlaba okhuphisanayo. Ikwaqaqambisa imiceli mngeni kunye nokuthintelwa ziinkampani ezikhokelayo kunye namathuba angundoqo okukhula aya kuthi ancedise ekwandiseni amashishini.
Olu xwebhu lukwabandakanya ulwazi olufana nefuthe lobhubhane we-COVID-19 kwingeniso yeli candelo loshishino, ukuvumela ngakumbi ukuqonda okungcono phakathi kwabachaphazelekayo.
Ukuqonda okuphambili kuhlalutyo lwempembelelo ye-COVID-19:
• Isimo se-COVID-19 kwihlabathi liphela kunye nesishwankathelo soqoqosho esilandelayo.
• Impembelelo kwiimfuno kunye neenkqubo zonikezelo zolu shishino.
• Iziphumo ezifutshane kunye nezexesha elide zokuqhambuka kweCoronavirus kuphuhliso lweshishini.
Isishwankathelo somhlaba wengingqi:
• Ingxelo yenza umhlaba ujonge eMntla Melika, eYurophu, eAsia-Pacific, Middle East naseAfrika, eMzantsi Melika.
• Inika isishwankathelo esibanzi sentengiso nganye yengingqi ngokwenqanaba lokukhula komntu ngamnye ngexesha lokufunda.
• Idatha eyongezelelweyo enje ngengeniso kunye nentengiso eveliswa ngingqi nganye edwelisiweyo ikwakhankanyiwe.
Eminye imiba ephambili evela kwiSitayile seoyile Ingxelo yeNkqubo yokuThutha iVapor:
• Ngokwengxelo, umda wokhuphiswano lwentengiso yeNkqubo yokuThengwa kweePetroli zePetroli yenziwe yimibutho enje ngeCEC-EP, iSinopec Corp., iWisebond, iJiangsu Aerospace Hewlett iTekhnoloji yoKhuselo lokusiNgqongileyo, iDOVER, iBayeco, iRuichang, iChongqing Endurance Industry Stock , Bohuitong kunye neDoule.
• Ukuqonda okubalulekileyo okunje ngeprofayile yenkampani, ukunikezelwa kwemveliso, amandla emveliso, umda omdaka, iipateni zamaxabiso kunye nesabelo sentengiso siphela esigcinwe yinkampani nganye.
• Okwangoku, imeko yemveliso yeSitishi seoyile sePetroli yokuQokelelwa kweVapor yezahlulo kubuyiselwe kwiSekondari, ukubuyiselwa kweoyile ephezulu kunye nabanye.
• Idatha emalunga nomthamo kunye noqikelelo lwengeniso yazo zonke iziqwengana zemveliso kwixesha eliqikelelweyo zibhaliwe.
• Iinkcukacha ezongezelelweyo kubandakanya iipateni zemveliso, isabelo sentengiso kunye nenqanaba lokukhula eliqikelelweyo lazo zonke iintlobo zemveliso zibalisiwe.
• Umda wokusetyenziswa kwesikhululo seoyile sePetroli sePetroli sePetroli siquka isikhululo sePetroli kunye nenkqubo yokubeka iliso kwi-Intanethi.
• Ingxelo ilinganisa isabelo sentengiso secandelo ngalinye lesicelo kwaye emva koko iqikelele inqanaba lokukhula kwabo ngokwexesha eliqikelelweyo.
• Ikwacacisa kananjalo ngonikezelo lweshishini kunye nolunye ukhuphiswano.
• Uphononongo luqhuba i-SWOT eneenkcukacha kunye nohlalutyo lukaPorter ezintlanu ukwenzela ukuvumela ukwenziwa kwezigqibo okungcono ngexesha lovavanyo lotyalo-mali.
Amagqabantshintshi aphambili eSitayile seoyile sokuThutha iiVapor kwingxelo yeNkqubo yentengiso:
• Ifuthe le-COVID-19 kwimithombo yengeniso yeZikhululo zeoyile zokuThutha iiVapor zokuDibanisa abadlali benkqubo.
• Ukubala kwexabiso lokuthengisa elipheleleyo kunye nengeniso iyonke yemarike.
• Imikhwa ewohlokayo kushishino.
• Umyinge wokukhula kwesikhululo seoyile sePetroli yokuQokelela iVapor.
• Ulwazi oluneenkcukacha kubasasazi abaphambili, abathengisi kunye nabarhwebi.
Iziphumo eziphambili zengxelo:
• Uvavanyo oluntsonkothileyo lomhlaba okhuphisanayo weSitishi se-oyile sePetroli sokuQokelela iVapor yeNtengiso
• Uhlalutyo olungqalileyo lwelizwe kwimfuno yokubonelela ngemfuno yesandi sebar yesandi eyahlukeneyo
• Impembelelo yokuqhubela phambili kwezobuchwephesha kwiSitishi se-oyile sePetroli sokuQokelela iMarike yeNkqubo
• Uhlalutyo lwe-SWOT lwenkampani nganye echaziweyo kwingxelo
I-HEBEI FCE UKHUSELEKO OLUKHETHEKILEYO LWEZINTO NEZIKHONZO ZE-CO., LTD,